म’हिलालाई से’क्स भ’न्दापनि ब’ढी म’नपर्ने के हो ? | सुदुरपश्चिम खबर
म’हिलालाई से’क्स भ’न्दापनि ब’ढी म’नपर्ने के हो ?
महिलालाई से’क्स भन्दापनि बढी मनपर्ने के हो ?
से’क्स महिला–पुरुष दुबैका लागि निकै आवश्यक हुन्छ र दुबैको लागि सम्भवत संसारमा सबैभन्दा धेरै मनपर्ने र सन्तुष्टिको कार्य मानिन्छ । से’क्ससँग सम्बन्धित थुप्रै अनुसन्धानहरु प्रकाशित पनि भइसकेका छन् ।अनुसन्धानले नै महिलाले भन्दा पुरुषहरुले से’क्सको बारेमा बढि सोच्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तैमा महिलाहरुको से’क्स व्य’वहार सम्बन्धि अर्को एउटा सर्वेक्षण गरिएको छ जसबाट अचम्मको कुरा पत्ता लागेको छ । अनुसन्धानका अनुसार ६ जनामध्ये एक महिला आफूलाई मन परेको केक खानका लागि शारिरक स’म्बन्ध बनाउन चाँहदैनन् अर्थात उनिहरू से*क्स भन्दापनि केक मन पराउछन् ।
डेली स्टारको रि’पोर्ट अनुसार आफूलाई मन परेको केकका लागि महिलाहरु र’क्सी पिउन र १३ प्रतिशत महिलाहरु मोबाइलको प्रयोग गर्न बन्द गर्ने गर्दछन् । यो अनुसन्धान २२०० महिलाहरु बिच ‘नेशनल केक विक’ को दौरानमा गरिएको हो ।
उक्त सर्वेक्षणका निर्देशक कपलिंगका अनुसार मानिसहरु आजकाल केक देखेपछि नखाई बस्नै सक्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘केक सबै मानिसहरुको मनपर्ने खानामा परेको छ । उक्त सर्वेक्षणले निकालेको निष्कर्ष अनुसार आठमध्ये एक कर्मचारी आफ्नो बोसलाई खुसी बनाउनका लागि केक खुवाउन मनपराउँछन् ।
यस्तैमा ११ प्रतिशत पुरुषहरु आफ्नी प्रेमिकाको मन जित्नका लागि केक नै पहिलो रोजाई हुने अनुसन्धामा देखिएको छ
थप समाचार- यी हुन महिलामा हुनुपर्ने ३२ लक्षण, तपाईंमा के के छन् ?
हिन्दु धार्मिक परम्पराअनुसार विवाहका बेला बर-बधुको चिना मिलाउँदा महिलामा हुने लक्षणलाई विशेष ध्यान दिइन्छ । खासगरी ३२ गुण भएकी युवती सर्वश्रेष्ठ मानिन्छन् । धर्मशास्त्रमा ‘३२ गुणले सम्पन्न’ नारीका बारे उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
महिलनामा हुनु पर्ने ३२ लक्षणहरु यी हुन् –
१) चमक्क चम्किने केश हुनु । २) हातका औँला लामा–लामा हुनु ।
३) दुढ आत्मविश्वास हुनु । ४) छाला नरम हुनु र वृद्धावस्थामा पनि युवाको जस्तै तेज हुनु ।
५) शरीरमा विभिन्न सात सुगन्ध हुनु ६) हरिणका जस्ता फिला हुनु ।
७) गुप्ताङगहरु गुप्त रहनु । ८) शरीरको माथिल्लो भाग सलक्क मिलेको हुनु ।
९) शरीरका सम्पुर्ण अङगहरु सुगठित हुनु ।१०) काँध पुष्ट, चौडा र गोलो हुनु ।
११) पाखुरा राम्ररी फर्कने हुनु । १२) पाखुरा लामा हुनु ।
१३) सम्पुर्ण शरीर तेजोमय हुनु । १४) शंख समान घाँटी हुनु ।
१५) अरुलाई चाडै प्रभावमा पार्न सक्ने क्षमता हुनु ।
१६) ३२ वटा दाँत हुनु । १७) चम्किला र टमक्क जोडिएका दाँत हुनु ।
१८) समान मिलेका दाँत हुनु । १९) बंगारा स्वच्छ र सुन्दर हुनु ।
२०) जिब्रो लामो हुनु २१) विभिन्न सानोभन्दा सानो स्वाद लिने शक्ति हुनु ।
२२) पातलो (सुरिलो) स्वर हुनु । २३) बिभिन्न विषयमा ज्ञानको चासो राख्ने बानी हुनु ।
२४) कुरा (बाचा)मा अडिक रहनु । २५) आँखीभौँका बीच रौँकै कोमल र सूक्ष्म रेखा हुनु ।
२६) मिलेको कपाल हुनु २७) अल्छी नहुनु ।
२८) सोझो र सिंहको जस्तो चिउँडो हुनु । २९) शरीरमा धेरै र परस्पर टाँसिएका नरम र दाहिनेतिर घुमेका रौँ हुनु ।
३०) पद्मासनमा बस्दा वृत्ताकार (गोलो) आसनमा हुनु ।
३१) स्वभाव लज्जालु हुनु । ३२) औलाका कापमा छाला विशेष बढी र जोड्दा टम्म मिलेका
दु‌ई नयाँ अध्यादेशमा के छ ?